fahasalamana sy fanafody | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: fahasalamana sy fanafody
Menaka manitra Rosemary
Raha tsy misy vola saron-tava volo lafo vidy, na tsy nahazo ny vokatra andrasana. Manaova sarontava menaka manitra ilaina amin'ny rosemary.
Fahaketrahana amin'ny vanim-potoana
Amin'ny tontolo maoderina, rehefa maika ny rehetra, dia miasa mafy izy ireo ary manokana fotoana kely amin'ny fahasalamana. Samy niaina fahaketrahana ny tsirairay, fa ny fomba hitsaboana azy, azo ialana ve?
Fanontaniana momba ny hatsaran-tarehy malaza, saro-kenatra loatra ianao ka tsy afaka manontany
Betsaka ny fanontaniana momba ny fahasalamana sy ny hatsaran-tarehy, fa tsy ny rehetra manontany azy mivantana. Andao hodinihintsika farafaharatsiny ny sasany amin'izy ireo!
Aza mihinana zava-mamy intsony
Efa maro ve no efa namaky momba ny loza ateraky ny siramamy sy ny zava-mamy? Fa ahoana no fomba handavantsika azy ireo? Inona no fomba tsara hialana amin'ny zava-mamy?
Inona no atao hoe schizophrenia ary inona ny soritr'aretiny?
Ny aretina mahatsiravina indrindra dia matetika tsy misy fiantraikany amin'ny taova, fa ny fahatsiarovan-tena. Ny Schizophrenia dia aretina izay miseho amin'ny endrika maro. Ny Schizophrenia dia afaka miseho amin'ny alàlan'ny haitao, ny nofinofy ary ny tsy fitovian'ny fitondran-tena sy ny fisainana.
Ahoana no fomba hiatrehana ny tsy fahampian'ny vitaminina lohataona
Tonga ny lohataona. Amin'ny maraina, ny masoandro dia eo ivelan'ny varavarankely ary mihira ny vorona, saingy mihasarotra ny mifoha, ary aorian'ny fiasana dia tsy misy hery intsony na inona na inona. Mahatsiaro ho toy ny rahampitso ...
Fa maninona no mitranga ny tazo ambany?
Ny maripanan'ny vatan'olombelona dia mari-pana miakatra kely ary mijanona ao anatin'ny 37-38 degre Celsius. Ny mari-pana toy izany dia tranga mahazatra, ny antony mahatonga azy samy hafa be. Fanaviana ambany ambany ...
Validol: fampiharana, angano ary fahamarinana
Tsy misy zava-mahadomelina malaza kokoa any Rosia noho ny Validol hanala ny fanaintainana ao am-po, indrindra fa ireo "marary fo vaovao". Raisin'ny olona milamina, misy misotro azy mba hihatsara ...
Amblyopia - inona izany? Amblyopia amin'ny ankizy: diplaoma sy fitsaboana
Araka ny antontan'isa farany, hita ho an'ny 2% -n'ny olon-dehibe eto amintsika ny amblyopia, saingy eo amin'ireo ankizy dia somary hafa ny toe-javatra, izay nohamafisin'ny fitsidihana matetika any amin'ny toeram-pitsaboana maso na andrim-pitsaboana manokana. Nataon'i…
Fa maninona no niseho ny mony? Niteraka sakamalaho tamin'ny tarehy
Ny olona tsirairay dia miatrika fanelingelenana toy izany amin'ny fisehoan'ny mony amin'ny tarehy. Ary ny sasany mijaly tsy tapaka amin'izy ireo. Na inona na inona ny fahita matetika nisehoan'izy ireo dia tampoka tampoka ny mony. Toa omaly ...
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny tsingerim-bolana: fomba
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny tsingerim-bolana? Mistery ny vatana vavy. Manana endri-javatra be dia be izy io. Ny fadim-bolana dia mitana andraikitra lehibe sy lehibe ho an'ny zazavavy. Ao anatin'ny antsoina hoe tsingerim-bolana, dia matotra ny folikel ...
"Miaina" (solika): hevitra, famaritana, vidiny
Isan-taona dia mihatsara ny fanafody ho an'ny sery sy gripa, vokarina amin'ny endrika vaovao misy fofona sy tsiro isan-karazany. Toy ny fitsipika, ny vola toy izany dia ampiasaina amin'ny famantarana voalohany ny aretina. Manamafy ny ...
Ny vokatry ny carbon monoxide eo amin'ny vatan'olombelona. Manampy amin'ny fanapoizinana karbonika monoksida
Azo inoana fa ny olona rehetra farafahakeliny nandre foto-kevitra toy izany hoe "carbon monoxide". Eny tokoa, noho io fanafody io dia olona maro no nijaly. Mampalahelo fa, na eo aza ny fahafantarana ny gazy karbonika, manapoizina miaraka aminy ...
Nilatsaka "Rinorus" i Nasal: torolàlana momba ny fampiasana, hevitra
Ho an'ny tanjona inona avy no azo omena fanafody Rinorus? Ny torolàlana momba ny fampiasana, ary koa ny famantarana an'io fitaovana io dia ho faritana ao amin'ity lahatsoratra ity. Holazaina aminao ihany koa ny fotoana ...
Firy ny rano mitete ao anaty sotrokely: rano, menaka na ranon-javatra hafa?
Posted on 15.09.2019 28.12.2019
Ny tarehin-javakanton'ny zava-kanto mahandro dia manambara fa ny fahombiazan'ny lovia rehetra dia 40 isan-jato noho ny kalitaon'ny vokatra, 20 isan-jaton'ny "tsirony" amin'ny fomba fahandro, ary 40 isanjaton'ny talenta sy ny fahamarinan'ny mpahandro no manamboatra azy. ...
Sanatorium "Iskra" (Sochi): hevitra, sary
Sanatorium "Iskra" (Sochi) dia eo ambanin'ny fahefan'ny Ministeran'ny Atitany anatiny any Russia, miorina amoron-tsiraka ao amin'ny distrikan'i Khostinsky ao an-tanàna. Ny manodidina dia misy faritra zaridaina ahafahanao mankafy zavamaniry subtropika tsy fahita firy mandavantaona. Ny hafanan'ny rivotra amin'ny ...
Fa maninona no reraka ny rantsan-tànana ankavanana? Inona no antony?
Tato ho ato dia nitombo ny isan'ny olona miatrika ny olan'ny fahatsentsenanana. Fa maninona no reraka ny rantsan-tànana ankavanana? Io fanontaniana io dia nanjary nifanaraka tokoa. Ary tsy kisendrasendra ny nifanindran-javatra io tamin'ny vanim-potoanan'ny solosaina manerantany. ...
Torohevitra ho an'i Neny: ny zavatra tsy maintsy lalovan'ny dokotera amin'ny akaninjaza
Mandeha ny fotoana, mihalehibe ilay zaza, ary tonga ny fotoana izay ilana ny zaza halefa any amin'ny akanin-jaza. Marihina fa tsy mora izany. Ho fanampin'izay mila manapa-kevitra amin'ny ...
Rano misy tantely. Tantely misy rano amin'ny vavony foana noho ny fihenan-danja. Tantely misy rano sy voasarimakirana
Ny fananan'ny rano dia hadihadiana hatrany amin'ny ambaratonga siantifika. Fantatsika rehetra fa io dia mitana ny ankamaroan'ny planeta misy antsika, ny vatan'olombelona dia misy 80 isan-jaton'io, ary ...
Labozia "Glycelax" ho an'ny zaza vao teraka: torolàlana, hevitra, vidiny
Tsy mbola nisy zazakely na iray aza nitombo nefa tsy nihinana fanafody. Ny zava-mahadomelina sasany dia ampiasaina hampihenana ny maripana sy hametrahana ny toetr'andro, fa ny hafa kosa afaka manafoana ny tsy fahazakana. Matetika dia tsy maintsy mandrehitra labozia ny ankizy ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 957 Next Page
61 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,776.